Saadaasha Hawada - Shabakad Saadaasha Hawada | Saadaasha Websaydhka (Bogga 5)
Cirka maxaa u buluug ah
Haddii aad waligaa isweydiisay sababta cirku buluug u yahay, halkan waxaad ku ogaan doontaa sababta ay u leedahay midabkaas ama u beddeleyso midabkeeda xilliyada qaarkood.
Waa maxay Groundhog Day?
Febraayo 2 waa maalin aad u qaas ah. Maalinta Groundhog waa loo dabaaldegaa, dhaqan ka soo jeeda Celtic oo gacan ka geysan doonta in la ogaado marka gu'gu soo laabto.
In kasta oo ay u muuqdaan laba fikradood oo isku mid ah aragtida saadaasha hawada, haddana waxaa jira kala duwanaansho weyn marka laga hadlayo ka hadalka cimilada iyo cimilada.
Isbedelka cimiladu wuxuu leeyahay cawaaqib xumo u horseeda dhulka, ma ogtahay waxa sababa iyo saameynta ay ku soo saarto dhulkeenna iyo noolaha?
Muxuu yahay Humboldt-ka hadda? Waa maxay cawaaqibka ay leedahay cimilada iyo dhulka? Soo ogow dhammaan faahfaahinta mawjadaha badda.
Xiisaha jiilaalka jiilaalka
Hadda oo xilligii jiilaalka hadda bilaabmay, la soco qaar ka mid ah xiisaha loo qabo solstice-kan oo u fasaxaya ciidaha Kirismaska.
Waxaan kuu sheegeynaa kuwee xoolaha ugu jira qatarta dabar goynta aduunka. Belar polar, penguins ... dhammaantood waxay u dagaallamaan inay badbaadaan.
Miyaad aragtay mowjado cirka oo dhan? Daruurahan gaarka ah waa daruuraha Kelvin-Helmholtz. Waxay aad u xiiseeyaan, si aad ah ayey u dhiirrigelisay ranjiye Van Gogh.
Si la yaab leh, waxay u maareeyaan inay khudaar ku beeraan qabowga tundra ee Alaska, gaar ahaan magaalo fog oo galbeedka ku taal oo la yiraahdo Beytel.
Meesha ugu roobka badan Spain
Weligaa ma isweydiisay meesha ugu roobka badan Spain? Cajiib ah sida ay umuuqato, maahan Galicia. Soo gal oo soo ogow. Waa hubaal inaad kaa yaabisay.
Sidee duufaan u sameysmaa
Ha lumin faahfaahinta qodobka soo socda, maxaa yeelay dhexdeeda waxaan si cad ugu sharraxayaa sida ay duufaanku u billowdo iyo farqiga u dhexeeya duufaanta
Dhul gariirku wuxuu beddelaa astaamaha laastikada ee qolofta dhulka
Dhulgariirradu waxay beddelaan astaamaha laastikada ee qolofta dhulka, sida lagu sheegay daraasad. Mawjadaha dhul gariirku waxay beddeli karaan culeyska cilladaha.
Waxaan kuu sheegeynaa meesha adduunka ugu ugu wanaagsan, halkaasoo xawaaraha dabayshu runti khatar leedahay: waxay ka badnaan kartaa 400km / saacaddii.
Ha lumin faahfaahin ku saabsan asal ahaan cimilada diirimaadka adduunka iyo isbeddelka cimilada iyo cawaaqibka ka dhalan kara mustaqbalka meeraha oo dhan.
10 xiiso leh oo ku saabsan deyrta sanadkan
Isbarbar dhigga dayrta ayaa hadda la soo daayay iyo waqtiga ugu habboon ee lagu ogaan karo 10 xiisaha dhabta ah ee xiisaha leh ee ku saabsan xilligan yar ee la jecel yahay.
Isbedelka Cimilada iyo El Niño ayaa gaajoon doona 10 milyan oo qof oo ku nool Afrika iyo Bartamaha Ameerika, sida ay sheegtay hay'adda aan dawliga ahayn ee Oxfam.
Koox cilmi baarayaal ah oo ka socda jaamacada Liverpool ayaa soo saaray daraasad muujineysa la qabsiga dhirta iyo isbedelka cimilada.
Jarmalka waxaa ka jira saameynta isbedelka cimilada, sida uu sheegay khabiir. Abaarta dalka saameyneysa ayaa halakeyn ku haysa beeraha.
Waa maxay shucaaca qoraxda sidee buu ku gaaraa gurigeenna, Dhulka? Gali si aad u ogaato boqolkiiba inta shucaaca uu meeraha meerayo.
Fiiro gaar ah u yeelo oo ha lumin faahfaahin ku saabsan farqiga u dhexeeya ereyada isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka maadaama aysan isku mid ahayn.
Miyaadan ogeyn sababta ay fulkaanaha u qarxaan? Gali si aad u ogaato asalka mid ka mid ah mudaaharaadka ugu quruxda badan uguna quruxda badan ee dabiiciga ah.
Daruuraha cirrus waa kuwa ugu xiisaha badan. Laga soo bilaabo carruurta waxaan ku aragnaa jilayaal iyaga ka mid ah, iyo dadka waaweyn waxaan jecel nahay inaan sii wadno sameynta. Gali si aad u ogaato noocyada jira.
Marabtaa inaad ogaato magaalada ugu kulul Spain? Gali si aad u ogaato. Andalus waa bulsho aad u diirran, laakiin run ahaantii ma kulul tahay?
Ma ogtahay in cimilada qabow ay ka khatar badan tahay kuleylka. Daraasad lagu sameeyay joornaalka "The Lancet" ayaa gaadhay gabagabadan. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Kordhinta heerka badda ee mitirka 60 waxay lahaan kartaa cawaaqib xumo. Ogow waa kuwee magaalooyinka tirtiri kara.
Diiwaanka heerkulka taariikhda Spain
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato diiwaanka heerkulka ee ku duuban taariikhda Spain, ha lumin faahfaahin oo fiiro gaar ah u yeelo xogta soo socota.
Khubaro dhanka cimilada ah oo ka socda Bangiga Aduunka ayaa soo saaray daraasad muujineysa in isbadalka cimilada uu saameeyo haweenka uurka leh.
Waxaa jira dalal dhowr ah oo adduunka ah oo la soo dersa xilliyadii ugu xumaa ee biyo yaraanta taariikhdooda iyo la dagaalanka abaaraha lagana fogaado kuwa ugu xun.
Fiiro gaar ah u yeelo hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato daruurahaas lagu abuuray buuraha dushooda loona yaqaan daruuraha hadalka.
Mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan uguna xiisaha badan ee meeraha, Antarctica, looma ogolaan karo inuu ku jiro khatar sababo la xiriira kuleylka adduunka.
Ballaarinta kuleylka waa wax aan ka badneyn farqiga u dhexeeya heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya ee meel la diiwaan geliyey waqti cayiman.
Stormhunter taariikhda iyo xaqiiqooyinka. Maxay tahay inaad sameyso si aad u noqotid jahwareer duufaan ah?
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones waa diyaarado aan duuliye laheyn oo soo badanaya. Saadaasha hawada, waxay kaa caawin karaan barashada astaamaha saadaasha hawada.
Isbedelka cimilada ee meeraha oo dhami ku dhacayaan ayaa si ba’an u saameynaya lamadegaanka, isaga oo khatar gelinaya nolosha dadka degan.
Astaamaha Mars ee laga arki karo dhulka iyadoo loo marayo telescope-ka waxaan ku muujin karnaa jawi leh daruuro cadcad in kastoo aan u balaadhnayn sida Dunida, isbeddelada xilliyadeed ee aad ugu eg kuwa Dunida, 24-saacadood, jiilka duufaannada ciidda iyo jiritaanka xargaha barafka ee ulaha ka baxa jiilaalka. Waxay umuuqataa mid la yaqaan, sax?
Marawaxadaha dabaysha: ma tahay tamarta ay soo saaraan sida cagaaran sida aad u maleyneyso?
Marawaxadaha dabaysha ama marawaxadaha dabayshu waxay noqdeen kuwa ugu caansan ee laga helo ilaha tamarta cagaaran ee dalal badan oo adduunka ah, maxaa yeelay waxaa badanaa loo tixgeliyaa inay leeyihiin saameyn xagga deegaanka ah oo aan eber lahayn. Daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan inaysan u cagaarnaan karin sidaad moodeyso
Tamar-dhuleedka. Guryo lagu koriyo iyo codsigooda ku saabsan beeraha
Tamar-dhuleedka waa tamarta lagu heli karo iyadoo laga faa'iideysto kuleylka gudaha ee Dunida. Kuleylkaan waxaa sabab u ah dhowr arrimood, kuleylkiisa u haray, wejiyada dhulka hoostiisa (kuleylka heerkulka oo qoto dheer) iyo kuleylka shucaaca (suuska isotopes-ka shucaaca leh), iyo kuwo kale.
Wareegyada dhulgariirrada, aagagga Rift iyo digniinta ugu horayso
Luminescences dhulgariirku waa ifafaale dhab ah, ma jiro nooc awood ka sarraysa sida UFOs ama sixir oo iyaga dhaliya, sidaa darteed waa in la barto
Dib u eegista khariidadaha caalamiga ah ee roobka adduunka waxaan ku daawan karnaa inta badan roobab-kuleylku waxay ka dhacaan woqooyi-galbeed. Palmyra Atoll, oo ku taal loolka 6 digrii woqooyi, waxay heshaa qiyaastii 445 cm oo roob ah sanadkiiba, halka meel kale, oo ku taal isla loolkaas koonfurta dhulbaraha, ay hesho kaliya 114 cm
Baarayaasha badankood waxay u maleeyeen in wasakhaynta hawadu ay keento daruuro waaweyn oo duufaan ah oo muddo dheer soconaya, taas oo ka dhigaysa in jihooyinka duufaannada u nugul yihiin qulqulka hawada, isla markaana ay keenaan isku xirnaan gudaha ah. Daraasaddan, wuxuu ku arkay in wasakheynta, dhacdo ahaan, ay daruuraha ka dhigeyso mid sii waara laakiin, qaab ka duwan fikirka, iyadoo hoos loo dhigayo cabirka barafkooda iyo hoos u dhaca tirada guud ee daruurta. Farqigaani wuxuu si toos ah u saameeyaa habka saynisyahannadu u matalaan daruuraha moodooyinka cimilada.
Hoos u dhaca barafka lagu arkay sanadihii la soo dhaafay meelaha ka hooseeya arctic ee Kanada wuxuu horseeday qallajin walwal leh oo laga qabo gobolka harada.
Xarumaha cimiladu uma eka oo keliya inay ka muuqdaan goobta xirfadeed, laakiin sidoo kale waxay qancinayaan xiisaha saadaasha hawada ee hiwaayadda.
Ballaadhnaanta kala duwanaanta xilliga diirimaadka dusha sare waxay kuxirantahay dhowr arrimood, kuwaas oo ay ka mid yihiin joogitaanka daruuraha iyo saameynta dabaysha.
Waxaa jira arrimo faragelin kara oo sababi kara luminta dhibco biyo ah ama kiristaalo baraf ah oo ka baxa daruuraha sida kuleylka hawada, roobka iyo isku darka qalajiyaha hareeraha hareeraha.
Noocyada kala duwan ee dhaqdhaqaaqa toosan oo u horseedi kara sameynta daruur waa: qalalaasaha farsamada, isdabamarinta, koritaanka orographic, iyo gaabis, fuulitaan dheer.
Sida laga soo xigtay WMO Cumulonimbus waxaa lagu sifeeyey daruur qaro weyn oo cufan, oo leh horumar toosan oo la taaban karo, qaab buur ama munaarado waaweyn. Waxay la xiriirtaa duufaanno.
Daruuraha isku-dhafan ayaa si toos ah u soo koraya daruuro lagu sameeyay inta badan mowjado taagan oo ay doorbidayso diirimaadka hawadu dusha sare ee dhulka.
Stratus waxay ka kooban tahay dhibco biyo yar yar inkasta oo heerkulkeedu aad u hooseeyo ay ka koobnaan karaan waxyaabo yaryar oo baraf ah.
Nimbostratus waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay cirro, inta badanna daruuro madow, oo leh muuqaal xijaabka roobka ama barafka oo si joogto ah uga soo dhaca.
Altocumulus waxaa loo kala saaraa daruuro dhexdhexaad ah. Daruuraha noocan ah waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay bangi, lakab khafiif ah ama lakab daruuro ah oo ka kooban qaabab aad u kala duwan.
Dhirta Cirrocumulus waxay ka kooban yihiin bangi, lakab khafiif ah ama xaashi daruuro cad ah, oo aan hoos lahayn, ka kooban xubno aad u yaryar. Waxay muujinayaan jiritaanka degganaansho la'aanta heerka ay joogaan.
Cirrus waa nooc ka mid ah daruur dheer, badanaa qaab fiilooyin cad ah oo ka samaysan kristantar baraf ah.
Marka hawada qoyan ay qabowdo oo ay ka gudubto marinka, uumiga biyuhu wuxuu ku ururaa isku-buuqsanaanta 'nuclei' ee ku jira hawada. Hawlaha kale ee la xiriira waa qaboojinta iyo sublimation.
Markaan tixraacno masaafada, joogga iyo dhererka daruuraha waa fikrado kala duwan. Qiyaasta taagan ee daruurtu waa masaafada toosan ee udhaxeysa heerka salkeeda iyo tan kore.
Albedo waa xiriirka ka dhexeeya tamarta ka muuqata iyo tamarta dhacdada ee dhererka dhererka dhererka iftiinka muuqda wuxuuna ka dhigayaa meerayaasha inay ifaan:
Qoondaynta cusub ee cabirka duufaanka Saffir-Simpson
Xarunta Duufaanta Qaranka ee Mareykanka (NHC) ayaa daabacday wax ka badal lagu sameeyay miisaanka Duufaanta Saffir-Simpson, kaas oo lagu cabiro xoojinta dabaylaha ka imanaya duufaanada kulaylaha markay gaadhaan heerka duufaannada.
Wax-ku-oolka aasaasiga ah ee shucaaca meeraha waa shucaaca ay soo saarto Qorraxda. Tamarta shucaacyadan waxaa loogu gudbiyaa Dhulka qaab mowjado elektromagnetic ah.
Khariidadda isku-dhafka ayaa ah matalaad muuqaal ah oo ku saabsan cimilada cadaadiska cimilada. Dhexdeeda waxaan ku mataleynaa cunsurrada sida isobars, xarumaha cadaadiska sare iyo kuwa hoose iyo nidaamyada wejiga.
Lakabka xadka meeraha ayaa ah qaybta hoose ee jawiga halka isku dhafka hawo ee hawada ku badan yahay.
Jawiga ayaa loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo doorsoomayaasha, sida cadaadiska, heerkulka ama cufnaanta, iyo kuwa kale, waxaana si guud u kala saareynaa Homosphere iyo Heterosphere
Tusmada NAO waxay cabiraysaa kala duwanaanshaha cadaadiska ee u dhexeeya Iceland iyo Lisbon ama Gibraltar. Wejiyada wanaagsan iyo kuwa taban ayaa dhici kara iyadoo ku xiran farqiga cadaadiska.
Dabaysha katabatic waa nooc ka mid ah neecawda buurta, dhulku wuu qabowdaa habeenkii hawo la xiriirta dushaasina waxay ku dhacdaa culeyska.
Dadka xiiseeya saadaasha hawada, cimilada iyo cimilada, khubarada saadaasha hawada ee AEMET, daraasad ku saabsan jawiga Dunida.
Mid ka mid ah ereyada ugu isticmaalka badan ee saadaasha hawada iyo warbixinnada saadaasha hawada ayaa ah kan qoyaan isku dhow. In kasta oo aan ...
Saadaasha hawada waa cilmiga sayniska iyo farsamada oo mas'uul ka ah barashada iyo saadaalinta ifafaalaha kala duwan ee dhaca ...